Ngoku ungagcina imisebenzi ye-Illustrator kwilifu | Izidalwa ezikwi-Intanethi
I-Adobe Illustrator ihlaziywa ngamaxwebhu eLifu kunye nolunye uphuculo
UManuel Ramirez | | Idizayini yeMifanekiso, Ezahlukeneyo
Kule mihla engapheliyo, I-Adobe iphinde yahlaziya i-Illustrator ngento enokuba kukudityaniswa kwamaxwebhu eLifu kunye nolunye uthotho lwezinto esiza kuphawula kuzo.
I-Adobe ehlaziya nganye yeapps zayo njengoko ibinjalo loo Photoshop yeKhamera okanye efanayo ukudityaniswa komsindo kwiAdobe Stock; umdla ukufika ukuba nethala leencwadi elipheleleyo leengoma zomsindo ukudibanisa iiprojekthi kwiPremier Pro.
Ukubuyela umva kwi-Illustrator, le nguqulo intsha yazisa ngamaxwebhu eLifu kunye nophuculo lokwandisa ukuhamba zomsebenzi. Sithetha nge-autosave ezenzekelayo yokulandela umkhondo wolu xwebhu ukuze amaxwebhu eLifu enze ukusebenza kunye ne-Illustrator kube lula kwaye kwahluke ngakumbi kunakuqala.
Ukuba namaxwebhu efini kuyenza icace gca ukusetyenziswa ngokulula kwe ulibale malunga nokonga imali ekuhlaleni imisebenzi. Ukubandakanya inokuba yintoni na ingxelo yenguqulo kunye nokusivumela ukuba simake, silandele kwaye sibuyele nakuphi na umsebenzi. Eli nqaku litsha liza kuqhubeka nokuphuculwa ngokwabelana ngamaxwebhu nabanye.
Ukwazi ukonwabela amaxwebhu eLifu ngaphandle kwento Kuya kufuneka ugcine ifayile njengoxwebhu lwelifu. Ngoku sinendawo enkulu yokuthambisa: xa uqala iprojekthi entsha kuseto loxwebhu, i-canvas ngokuzenzekelayo iyanda ngobukhulu xa ubukhulu boxwebhu bungaphezulu kwe-intshi ezingama-227.
Le nguqulo intsha yandisa i-GPU yakho yePC ukubonelela ngemizobo njengokuba uyila. Oko kukuthi, xa olu khetho lusebenza, into inikezelwa njengoko uyileleyo nokuba usebenzisa iigradients, iziphumo okanye izitayile zestroke.
Kananjalo babenjalo kubandakanya ukuphuculwa kwengxelo efunyenwe ngumzi wase-Illustrator woyilo. Zibhodi zobugcisa ukusika kunye nokuncamathisela, uxwebhu olutsha lweefestile luvula amaxesha ali-10 ngokukhawuleza, ungayenza isebenze imigaqo yamaxwebhu amaninzi kwaye xa ugcina ifayile yenziwe ngokuthe ngqo kwindawo yokugqibela okanye kwifolda engagqibekanga ye-Illustrator.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » I-Adobe Illustrator ihlaziywa ngamaxwebhu eLifu kunye nolunye uphuculo
Ubugcisa be pop kunye noAndy Warhol: izinto ongazaziyo malunga nentshukumo yokuqala yobugcisa
I-Adobe Stock Audio iyinyani njengoko yabhengezwa yi-Adobe kwiiyure ezidlulileyo